विकास र अर्थ समितिद्वारा द्रुतमार्गको अनुगमन | Ratopati
प्रतिनिधिसभाको विकाश तथा प्रविधि समिति र अर्थ समितिले काठमाण्डौलाई तराई जोड्ने दु्रत मार्गको संयुक्त अनुगमन गरेको छ ।
उनले भने, “४४ किलोमिटर सडक बनिसकेको रहेछ । २० किलोमिटर ब्लाकटपिङ गर्न सकिने अवस्थामा पुगिसकेको रहेछ । ३ वटा टनेल र करिब करिब ७ किलोमिटर लामो टनेल र बाँकी भएको ११ किलोमिटर । यसलाई अघि बढाउनका लाागि जुन कसरत भईरहेको छ । सकेसम्म छिटो टुङ्गियोस् । फेरि कुनै राजनीतिक खिचातानीको सिकार नबनोस् । आर्मीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने पुर्वाधार चटक्क पारेर राखिदिएको छ । राज्यले मेलम्चीको लेसनलाई अगाडि राखेर बहुत ठूलो रिसर्च गर्नुपर्ने छ । विकासको यात्रामा किन पछि परिरहेका रहेछौ हामी ? ४ बर्षमा हुनुपर्ने काम हामी ३० बर्षमा सकाउन सक्दा रहनेछौ । के हामी विकासलाई प्राथमिकता दिएका रहेछौ त ? ”